Ukuphefumlela Ubomi ekufundeni iBhayibhile
Esinye sezicwangciso ezifundwayo zokufunda iBhayibhile yiSicwangciso soPhulo lweSifundo seNtshontsho , esiqulunqwe nguJames McKeever, Ph.D., kwaye sipapashwe ngu-Omega Publications. Unyaka ndaqala ukulandela ilungiselelo elilula, iBhayi- bhile ngokuqinisekileyo yaphila ebomini bam.
ITestamente Endala, iTestamente Entsha, iiNdumiso kunye neMizekeliso
Njengazo ezininzi izicwangciso zokufunda iBhayibhile, iSicwangciso soPhuculo seSifundo seNguqulelo seBhayibhile samvumela ukuba ndilandele inkcazo yenkqubo yemihla ngemihla ukuba ndiqalise nanini nayiphi na imini yonyaka.
Isicwangciso sokunqoba sandinika ukufunda okunye kwiTestamente Elidala, enye yokufunda kwiTestamente Entsha kunye nokuba yiNdumiso okanye iproverb imihla ngemihla. NgeeNdumiso kunye neMizekeliso zibandakanya kwingcamango nganye, ndazifumana ndihlala ndihlaziywa kwaye ndinyuswa. Oku kwakubaluleke ngakumbi xa ndisebenza ngendlela endiyithandekayo kwaye kunzima ukuqonda amacandelo eTestamente Endala.
Into ebalulekileyo yolu cwangciso yindlela endithatha ngayo kwiTestamente Elidala. Ngaphandle kweencwadi ezimbalwa ezizithandayo, amaKristu amaninzi ahlala kude nokufunda iincwadi zeTestamente Elidala. Ingaba abayiqondi isicatshulwa, okanye izahluko zibonakala zide kwaye zixhaphaza, zizele uluhlu, imithetho, amagama, kunye nemilinganiselo engabonakaliyo inentsingiselo okanye isicelo kwimpilo yemihla ngemihla. Isicwangciso soNkohlakalo sichazwe ngokulandelelana, ngoko ke, ndikhokela kwiTestamente Elidala ngokulandelelana kweemeko ezenzekayo.
Oku kwavulela indawo entsha entsha ye-adventure kunye nokufumanisa okubandakanya umgca wexesha lookumkani kunye nabaprofeti beTestamente Elidala.
Ngokuphindwe kabini ngeVangeli
Kwaye enye into eyandiyisa kwiCwangciso loPhulo kwakukuphela kwonyaka, ndafunda iincwadi zeVangeli ezimbini kabini. Oku kujolise ukugxila kwam ebomini bukaYesu, ukugcina umfanekiso wakhe kunye nomlingiso wakhe uhlala uphaphaze phambi kwam amehlo.
Isicwangciso soPhulo lweSifundo soBuhlu lweBhayibhile sihlanganiswe kwincwadana ecacileyo, iphepha ngalinye eliqukiweyo lwenyanga enye yokufunda. Iquka ikholamu yokugcina umkhondo wenkqubela yakho kunye nendawo encinci yamanqaku akho.
Ukuba awuzange ufunde ngexesha leBhayibhile , okanye ukuba ufuna ukuphefumula ubomi ekufundeni kwakho kwansuku zonke, ndiyakhuthaza ukuba unike esi sicwangciso ukuba uzame. Unako ukufumana iikopi kwiindawo ezininzi zokuthenga ezitolo zamaKristu okanye ukuthenga i-intanethi khetha "Qhathanisa amaxabiso" iqhosha elingezantsi.
Uphi iCarbon efumaneka kwiTable Periodic?
Ukuqonda ukuBaluleka kweMbono oyiNkcazo yeMida
Imibuzo Yengxoxo Yenqila Yencwadi ye-'Intshisekelo 'kaMeg Wolitzer
Imimangaliso kwiimifanekiso: 'Ukuthunjwa'
Fumana Iziphumo Ezinkulu zokwakha umzimba ukusuka kwi-short 25-30 Minute Ukuphucula umzimba
Indlela yokudibanisa "Umcuphi" (ukupheka)
Ukusebenza kwe-Husky - Ukuhlasela kwe-Allied yeSicily
Ukucamngca okucamngcayo okufundiswa kootitshala
UJorn Utzon, uMyili wePritzker-Winning Architect we-Sydney Opera House
Ichthyosaur Imifanekiso kunye neeprofayili